Radio sweden somaliska. 🏆 Af. 2019-11-27
Radio sweden somaliska. Qaamuus cilmiyeed af 2019-11-27
Xisbiyada oo ka doodaya in lacago dheeri ah la siiyo degmooyinka
Igår gjorde han succé i en viktig match mot det stora laget Real Madrid. Sidoo kale waxaad af iswiidhishkana kaga boggan kartaan wararkiina bogga idaacadda wararka ee. Waxaad xitaa koorsooyin iyo barnaamijyo ka dhigan kartaa jaamacadda shacbiga ah. Qaarna intii waqti ah ayey shaqeeyaan, gadaal ayeyna waxbarasho ka billaabaan si ay aqoon cusub u helaan. Halka ay horay u ahayd in baaris lagu sameeyn jirey oo keliya nidaamka iskuulka. Hoggaamiyaha ciidanka ammaanka Anders Thornberg oo ka warramay dunuubta dhaca ee dhallaanku geeysto oo aad u soo batay ayaa sheegay in dhabbada keliya ee looga hor tegi karaa tahay in dhammaan bulshada qeeybaheeda kala duwani gacan ka siiyaan ciidanka ammaanka, isla markaana la mariyo dhallaanka falalkaa ku kaca cawaaqibta ey mudan yihiin si ey u dareemaan.
Waxaan xoogga saaray oo ugu badan qaybta caafimaadka oo kaligeed u kala saaran 4 qaybood, ayuu sharraxay Cabdiqani. Dooro jaamacad iyo waxbarasho Waxaa waddanka oo dhan ka jira ku dhawaad 50 jaamacadood laga soo billaabo waqooyiga ilaa iyo koonfur Swiidhan. Waxaa sidoo kale jirta arday ajaanib ah oo fara badan oo doorta in ay Swiidhan yimaadaan si ay jaamacad uga dhigtaan. Waxaad sidoo kale macluumaad ku aaddan shaqada iyo doorashada xirfadda ka heli kartaa Xafiiska shaqada. Arrinka xiisaha leh ee dooda hoggaamiyeyaasha xisbiyada ku dhex martay ayaa ah in degmooyinka dalka la siinayo lacago dheeri ah iyo in kale. Den svenska fotbollsspelaren Alexander Isak spelar i det spanska laget Real Sociedad. Jaamacadda xirfaduhu waxay isku dareysaa waxbarashooyin qoraal iyo qabasho u baahin iyadoo xiriir dhaw la leh shaqa bixiyayaasha aagagga kala duduwan ah.
Qaar waxay billaabaan in ay toos waxbarasho u aadaan ka dib marka ay dugsiga sare dhameeyaan. Wixii intaa ka horreeyay waxaa guri walba shati ahaan looga qaadi jirey 2 400 sannadkii. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa. Buuggan ayaa laga heli karaa dhamaanba goobaha buugaagta lagu iibiyo ee dalka Sweden, ayaa si gaar ah diiradda u saaraya eray bixinnada u gaarka ah ilaa 5 qaybood, haddaba wuxuu ka sheekaynayaa qaybahaasi iyo midda ugu badan oo lafteedu sii kala baxaysa iyo sababta uu sidaa u yeelay. · Furitaanka dugsiyada madaxa bannaan oo la adkeeyey Laga bilaabo koowda bisha jannaayo 2019 waxaa la adkeeyey xeerka lagu furan karo iskuul gaar loo leeyahay, iyadoona hab ka duwan loo baari doono mulkiilaha iyo hoggaanka iskuulka. Tirakoob hordhac ah oo uu soo saaray ururka shirkadaha tamarta Sweden, ayaa muujisay in dhoofinta korontada laga keeno Sweden ay korortay sanadkii hore 50 boqolkiiba, marka la bar bar dhiggo sanadkii ka sii horeeyey ee 2108-kii.
Qaar ka mid ah xeerarka cusub ee hirgaley 2019
Waxaa shuruudo ka badan lagu xiri doonaa tusaale ahaan mulkiilaha, hoggaamiyaha iyo xubnaha maamulka iskuulka. Qaamuusyo kale oo af soomaali ku qoran ayaa jira. Real Sociedad slog Real Madrid, med 4-3. Falanqeeyaha arrimaha gudaha ee Ekot Tomas Ramberg, ayaa aaminsan i in ciyaarta xisbigga V ay noqon karto waddo ay ku dooneeyso in dowladdu ku dardar geliso go'aankeeda. Tallaabadaasina oo looga gol leeyahey sidii loo adkeeyn lahaa sirta codeeynta iyo in bulshada codeeynaysa saameeyn lagu yeesho.
Nu hyllas han i spanska tidningar. Qaar ka mid ah shuruucdaa waxey yihiin: · Shatigii tv-ga. Wadanka Finland wuxuu dib u dhac ku yimid furitaanka warshada soo saari laheyd tamarta nukliyeerka, halka Norwayna kaydka waraha biyaha uu aad uga gureen sidii caadiga ahayd. Toddobaad ka hor waxaa albaabada loo laabay Ringhals 2, dhamaadka sanadkana waxaa meesha ka baxaya kuwo badan oo kale, markii la xiro warshad kale oo nukliyeer ku shaqeeysa waxaa yaraaneeysa wax soo saarka. Swiidhan waxaa ka jira jaamacado waxbarasho cilmi baaris leh iyo kuwo aan lahayn.
Sidoo kale waxaa la adkeeyey damaannaddii dar yeelka caafimaad ee goobaha bukaan socodka iyadoona muddo saddex maalmood ah lagu soo koobey in dhakhtar ama cid aqoon u leh baahida caafimaad lala kulmo, halka ay horey uga ahayd toddoba maalmood. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa. Ma khasabbaa in aan ahaado muwaadin swiidhish ah? Sida waxa yiri Tomas Ramberg, oo farta ku fiiqay farqi muhiim ah oo u dhexeeya arrinta ku xeeran xafiiska shaqada dadweynaha iyo deeqaha dowladda hoose. Goolka ka dambeeya ayaa ah sidii cadaalad loogu abuuri lahaa dadyoowga xilliyada kala duwan shaqeeya. Laakiin jaamacadaha badankoodu waxay leeyihiin waxbarashooyin ku aaddan maaddooyin tira badan.
Jaamacadaha shacbiga ah waxay sidoo kale kuu diyaarin karaan waxbarasho jaamacadeed. Farqiga u dhexeeya jaamacadaha cilmi baarista leh iyo kuwa aan lahayn waa in jaamacadaha cilmi baarista leh universitet ay mar walba bixin karaan waxbarasho cilmi baaris ah. Xisbiyada Moderat-ka, Kristdemokraterna iyo ayaa aaminsan in ay haboon tahay in lacago dheeri ah la siiyo iskuullada, daryeelka waayeelada iyo adeegyada kale. . · Khamaarka Maadaama la fasaxayo suuqa khamaarka Sweden waxaa laga bilaabo 1-da bisha jannaayo hirgalay xeerka iney shirkaduhu u heeystaan shati xeereeysan, isla markaana canshuur ahaan ku bixiyaan 18% macaashka ka soo gala. Waxey macnaheedu tahay in qooyska laba ruux ka kooban laga qaadi doono 2 600 oo koron sannadkii. Pernillana, waxaa ay runsan tahay in awooda dabaysha ay jawaab u noqon doonto waxa beddeli doona korontada ku shaqeeya marwaxadaha dabeeysha.
Shuruudaha laga dooneyo waxaa ka mid ah diiwaan gelinta dadka khamaarka ciyaaraya. Awoodda tamarta iyo tamarta nukliyeerka ayey ka timaadaa quwadda ugu badan korontada Sweden, laakiin wax soo saarka korantada dabayshu waxay kordhisay ku dhawaad shan meelood meel, waxayna jebisay rikoor cusub sanadkii 2019-kii. Siyaabo kale oo wax loo baran karo Waxaa sidoo kale iska cad in ay jiraan waxyaabo kale oo la dooran karo oo aan waxbarasho jaamacadeed ahayn si waxbarasho loo sii wato dugsi sare ka bacdi. Dhoofinta alaabada saafiga ahi waxay ka dhigan tahay in ka badan 15 boqolkiiba wax soo saarka guud ee Sweden. Bogga internetka ayaannu maalin walba isniinta illaa iyo jimcaha aannu war-bixinno hor leh ku daabacnaa laga bilaabo 9:30 illaa iyo 17:30. Waxaa la mamnuucey in la safsafriyo si carwooyin loogu dhigo xayawaan ey ka mid yihiin maroodiga iyo libaaxa badda sjölejon. Wixii intaa dhaafsiisan waxaad wararka ka daalacan kartaan bogga internetka ee ingiriiska.